Tacadiyo haween loogaystay oo laga heshiiyay - BBC News Somali
Tacadiyo haween loogaystay oo laga heshiiyay
28 Disembar 2015
Image caption Haweenka kale ee la addoonsaday waxay u kala dhasheen Shiinaha, Philippine, Indonesia and Taiwan.
Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa gaaray heshiis looga gol leeyahay in lagu xaliyo arrin uu muran ka taagnaa muddo aad u dheer oo ku saabsan haween reer Kuuriyada Koonfureed ah oo laga dhigay addoomo galmo uun loo haysto intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka.
Kulan ka dhacay magaalada Seoul ee caasimadda u ah Koonfurta Kuuriya ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Japan Fumio Kishida, ka jeediyay raali galin kau aadan haweenkii lagu qasbay in shahwo gudasho ula joogaan ciidammada Japan.
Xukuumadda Japan waxaa kale oo ay ogolaatay lacag magdhaw ah oo ku dhaw sagaal milyan oo doolar.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Koonfurta Kuuriya Yun Byung-Se ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay mid kamadambays ah oo aan laga noqon karin.
Ilaa 200,000 ayaa lagu qiyaasay haweenka la addoonsaday ee ciidammada Japanese-ku ay u haysteen in ay u galmoodaan intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka, intooda badana waxay u dhasheen Koonfurta Kuuriya. Afartan iyo lix ka mid ah haweenkaasi ayaa hadda ku nool Koonfurta Kuuriya.
Haweenka kale ee la addoonsaday waxay u kala dhasheen Shiinaha, Philippine, Indonesia and Taiwan.
Wariyaha BBC-du wuxuu leeyahay ma cadda in heshiiskaasi uu raali galin doono dadkii ay dhibaatadu soo gaartay